Shina: Mametraka Ny Tenany Eo Ambany Fanaraha-maso I Ai Weiwei, Mpanakanto Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2012 16:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Svenska, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Nametraka kamera kely mandeha mivantana efatra tao an-tranony any Beijing ilay mpanakanto Sinoa misongadina Ai Weiwei ho mariky ny fanoherany ny fanaraha-mason'ny mpitandro filaminana mandritra ny 24 ora. [Fanavaozana: Nanome baiko an'i Ai hamono ireo kamera keliny ny manampahefana Sinoa omaly 4 Aprily.]
Tamin'ny taona lasa; ny 3 Aprily [zh], voasambotra tany amin'ny fiantsonan'ny fiaramanidin'i Beijing i Ai Weiwei noho ny filazana azy ho “mandrahona ny fiarovana ny firenena”. Toa ampahany amin'ny fanakatsakanana ny antso ho an'ny Fanovàna Sinoa Jasmine nalaina tahaka tamin'ilay Lohataona Arabo. Notanana tanatina toerana miafina nandritra ny 81 andro i Ai ary nohadihadiana maherin'ny in-50 noho ny fampisaraham-bazana ny firenena, heloka ara-toekarena, tsy fandoavan-ketra, fizarana sary mamoafady sy vetaveta, fanambadiana olona roa, fanakalozam-bola tsy ara-dalàna sns.. Efa nofotorana izy hatramin'ny 22 Jona 2011 izy. Avy eo dia narahan'ny mpitandro filaminana maso tsy tapaka. Farafahakeliny 15 ny isan'ireo kamera ivelan'ny tranony.
Napetraka mirazotra amin'ny fafan'ny solosainy sy akaiky ny valindrihana ireo makera kely efatra mba hanara-maso ny birao fiasàny, ny tokontany sy ny efitrano fatoriany. Ity eto ambany ity dia sary azo tamin'ny fotoana natoriany ny 3 Aprily:
Kamera ao amin'ny Efitrano fatorian'i Ai
Raha nankalaza ny tsingerintaona nanjavonany i Ai Weiwei, nanadihafy an'i Ai tao amin'ny Twitter ilay mpiaro ny zon'olombelona sady naman'i Ai, Liu Xiaoyuan:
@Liu_xiaoyuan [zh}: Androany no tsingerintaona nanjavonan'i @Aiww. @Aiww, mihevitra ve ianao fa mbola hiatrika tranga tahaka izany indray amin'ny hoavy?
@Aiww [zh]: Amin'ny fotoana rehetra
@Liu Xiaoyuan [zh]: @Aiww: Talohan'ny 3 Aprily tamin'ny herintaona, efa nieritreritra ve ianao fa mety hanjavona tahaka izany? Nisy mpisera aterineto vitsy nilaza fa mety ho porofo iray “mandrisika ny fisaraham-bazana ” ny hevitrao momba an'iYang Jia [mpamono mpitandro filaminana tao Shanghai] ary niampanga anao ho tanana an-tranomaizina mandritra ny 10 taona. Ny antony nahatonga azy ireo tsy hihetsika dia noho ny toerana misy ny rainao. Ny zavatra tsy azoko dia ny hoe maninona no telo taona taorian'ny raharaha Yang Jia ianao no nosamborin'izy ireo? Tena lehiben'ny hery manohitra an'i Shina marina ve ianao?
@Aiww [zh]: Tsy naka sary an-tsaina an'izany velively aho. Narary mihoatra noho izany ny raiko raha nilaza malalaka aho fa mpikambana ao amin'ny hery mpanohitra an'i Shina ny tenako.
@Liu_xiaoyuan [zh]: Fanontaniana fanadihadiana ho an'i @aiww: mpanakanto ianao, maninona ianao no tsy manao zava-kanto vitsivitsy hanandratana ny firenenao? Ho setrin'izay, milalao ny “soavalin'ny bozaka sy ny fotaka” (endri-panoherana ny sivana aterineto) ianao… moa ve ianao tsy nivoady ho fahavalon'ny firenena?
@Aiww [zh]: Zon'olombelona fototra ny fahalalahana miteny, mamaritra ny fiainana izany. Tao anatin'ny zavatra nihatra tamiko, nanimba izany fepetra izany indrindra ny tanindrazako.
@Liu_Xiaoyuan [zh]: Hitsoaka any amin'ny Konsiolàn'i Etazonia tahaka an'i Wang Lijun koa ve ianao?
@Aiww [zh]: Lavo i Wang. Tsy mba mahery fo be tahaka azy aho.
Misy fanazavana ny fihetsiny amin'ny fomba tsy dia maneso kokoa hita ao amin'ny New York Times. Nilaza i Ai Weiwei tao amin'ilay tambanjotram-baovao:
Feno fanaraha-maso sy famoretana teo amin'ny fiainako – ny findaiko, ny solosainako. Nanaovana fisavana ny biraonay. Nokarohana ny tenako, isanandro aho dia misy mitsongo dia, misy kamera fanaraha-maso eo anoloan'ny tranoko. Noho izany dia nihevitra aho hoe maninona moa raha asiako [kamera] vitsivitsy eny amin'izay afaka mahita ny fihetsiko daholo ny olon-drehetra. Vitako izany ary ny ankilany [ireo manam-pahefana] ihany koa dia afaka maneho fangaraharana kely.
(Lahatsoratra niara-nosoratana tamin'i Oiwan Lam)